PressReader - Isolezwe: 2018-06-15 - Umqeqeshi ukhala ngesigcwagcwa kwi-PSL
Umqeqeshi ukhala ngesigcwagcwa kwi-PSL
UMQEQESHI owazakhela igama kwiMoroka Swallows, uZeca Marques, uthi sekulukhuni satshe ukuthola umsebenzi emaqenjini angaphansi kwePremier Soccer League (PSL).
Ngokusho kwalo mqeqeshi ngendlela okunzima ngayo ukuthola itoho, usethathe ikhefu lonyaka nohhafu kwezokuqeqesha wagxila emabhizinisini.
UMarques, onqobe neZinyoni isicoco seMTN 8 ngo-2012, ugcine ukuqeqesha ngeSantos, egcine ngokugawulwa yizembe kwiNational First Division (NFD), yehlela kwiABC Motsepe League.
Echazela Isolezwe, uMarques uthe amaqembu angaphansi kwePSL, anezimfuno zawo, nabaqeqeshi abathize abadingayo. Nakuba engakufihli ukuthi ubengakujabulela ukucija iKaizer Chiefs noma iSupersport United, uMarques uthe uyazi ukuthi kulukhuni satshe ukuba lokhu kwenzeke.
“Kunzima ukuthola umsebenzi kwiPSL muva nje. Amanye amaqembu anezimfuno ezithize kwezokuqeqesha. Ngangizosifaka isicelo sokuqeqesha kwiSupersport kodwa ngathola ukuthi kumele ngikhohlwe ngoba bafuna umqeqeshi waphesheya. Ngisola ukuthi ukudliwa yizembe kweSantos kwiNFD yikona okwangifakela isigcwagcwa kubantu abaningi. Okubuhlungu ukuthi nami ngafica kumapeketwana kuyona, kwadla khona ukuthi ngafika umonakalo usudalekile ngahluleka ukulungisa isimo,” kusho uMarques oneziqu zokuqeqesha ze-Uefa Pro License.
Eqhubeka echaza lo mqeqeshi oke wacija neBlack Leopards eminyakeni edlule, uthe akwehli kahle ukungalitholi itoho ekubeni engasazi isono sakhe. Uthe kumphatha kabi ukuthi kukhona abaqeqeshi abasanda kuqala ukuqeqesha kodwa abafunwa ngapha nangapha.
Abanye abaqeqeshi abangakawatholi amaqembu amasha osekuphele isikhathi bengasebenzi, uGordon Igesund, Ephraim “Shakes” Mashaba, Jacob Sakala ukusho abambalwa.
“Njengamanje nginenkampani ebizwa nge-OneBiz engibambisene kuyona nabangani basePortugal. Umsebenzi wethu ukulungisa izakhiwo nokunye okuningi okuphathelene nezakhiwo. Ngingathi nje, njengamanje iyona engiziphilisa ngayo. Uma kuqhubeka kanje, ngizokuyeka phansi ukuqeqesha,” kusho uMarques.
Uveze ukuthi usenobudlelwano obuhle nabaphathi beLeopards esanda kukhuphukela kwi-Absa Premiership.
UMQEQESHI uZeca Marques ukhala ngesigcwagcwa esenza angawutholi umsebenzi wokuqeqesha emaqenjini ePSL